Malunga nathi-Umatshini woBuchule bokupakisha i-Smart Weight Co, Ltd.
I-Smart Weigh ihambise umatshini wokupakisha we-multihead kumazwe angaphezu kwama-65. I-Smart Weigh yasekwa ngonyaka ka-2012 nomzi-mveliso wayo wokuqala owawufumaneka kwidolophu yaseHenglan, isixeko saseZhongshan, eGuangdong, China, kunye nendawo ekuthengiswa kuyo ekujoliswe kuyo phesheya kwezilwandle. Abasunguli be-3 be-Smart Weigh balawula uyilo loomatshini, iinkqubo kunye nentengiso, amashishini ale nkampani akhule ngokukhawuleza ngenxa yolwahlulo oluthile, i-Smart Weigh yathutha yaya kwi-4500m2 umzi-mveliso wangoku ngonyaka ka-2017.
Umatshini wokupakisha we-Smart Weigh Cooper, kudala wagxininisa ukubonelela ngesisombululo esisebenzayo nesizenzekelayo kunye nopakisho lwesixhobo somatshini ngamaxabiso afanelekileyo. Umgangatho womatshini kunye nokusebenziseka kwakha ubudlelwane obuhle kunye nexesha elide kunye nabathengi. Kwangelo xesha, singumdibanisi womthombo! Intsingiselo sinikezela ubunzima, umatshini wokupakisha, iinyibilikisi, ukujonga ubunzima kunye njl.njl. Umgca wokupakisha ogcwele ubunzima beengxowa, iidyokhwe, iibhotile kunye neebhokisi.
Siyaphumelela ngokuthatha uxanduva olupheleleyo phantsi KOKUGCINWA, UKUQHUBEKA NOKUFUNDA!
Sibeka ekuboneleleni ngezisombululo ezichanekileyo kwaye eziphezulu emva kwenkonzo yentengiso kubathengi, qinisekisa ukuba siyazifezekisa iimfuno zakho zenzekelayo. Njengomvelisi onekratshi kunye nomthengisi womlinganisi olinganayo, umlingisi weentloko ezininzi, umdibaniso womlinganiso wefom ethe nkqo ugcwalise umatshini wokupakisha itywina, umatshini wokupakisha ojikelezayo, imitshini yesinyithi, umvavanyi wobunzima kunye nobunzima bemoto kunye neenkqubo zokugcwalisa. .
ekhoyo eyenziwe ngokwezixhobo ezininzi ezilinganayo
Umthamo wonyaka wokupakisha umgca
24 × 7 iiyure
Uvavanyo lokuguga oludala luqinisekisa ukuzinza komatshini
Ukuqhekezwa kweSmart Weight ngokusebenzisa imithambo emininzi yokulinganisa ukutya okhethekileyo kwimizi-mveliso ethile yokutya, enje nge-kimchi, irayisi ethosiweyo, i-noodle, isaladi, iziqhamo ezitsha, inyama, itshizi, ikeyiki yerayisi, isoseji, ukuxutywa kwamandongomani, ukudibanisa iilekese njlnjl. kwaye unamava kakuhle ekucwangciseni ubunzima bokupakisha imigca yomatshini ngokwesiseko sabathengi.
Iqela emva kwentengiso kunye neenjineli ezinobuchule ezili-10 ezixhasa iinkonzo zaphesheya / zekhaya emva kokuthengisa kunye nenkonzo ye-Intanethi.